စီးပွားရေးသတင်းတို Archives | Page3of 30 | Frontier Myanmar
ရန်ကုန်-မီလန် တိုက်ရိုက် လေကြောင်းခရီးစဉ် Neos က စတင်ပြေးဆွဲ
ရန်ကုန်မြို့နဲ့ အီတလီနိုင်ငံ မီလန်မြို့တို့အကြား လေကြောင်းခရီးစဉ်ကို အီတလီနိုင်ငံက Neos လေကြောင်းလိုင်းက စတင်လိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် ဒီလေကြောင်းလိုင်းဟာ မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ အီတလီ၊ ဥရောပတို့အကြား ပြေးဆွဲပေးနေတဲ့ ပထမဆုံး ဥရောပ လေကြောင်းလိုင်းလည်း ဖြစ်လာပါတယ်။ အီတလီကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည် ၃၅ ဦး လိုက်ပါလာတဲ့ Neos လေကြောင်းက လေယာဉ်ဟာ.
ကွမ်ကျိုး-ရန်ကုန် တိုက်ရိုက် လေကြောင်းခရီးစဉ် စတင်ပြေးဆွဲ
ရန်ကုန်မြို့နှင့် တရုတ်နိုင်ငံ၊ ကွမ်ကျိုးမြို့တို့အကြား တိုက်ရိုက်ပြေးဆွဲမည့် ခရီးစဉ်ကို တရုတ်နိုင်ငံမှ စရိတ်နည်း လေကြောင်းလိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည့်9Air လေကြောင်းလိုင်းက အောက်တိုဘာ ၂၈ ရက်နေ့တွင် စတင်လိုက်သည်။ အဆိုပါလေကြောင်းလိုင်းက ကွမ်ကျိုးနှင့် မန္တလေးမြို့အကြား တိုက်ရိုက်ခရီးစဉ်ကို အောက်တိုဘာ ၂ ရက်နေ့က စတင်ပျံသန်းခဲ့ပြီးနောက် ရန်ကုန်သို့ တိုက်ရိုက်ခရီးစဉ်ကိုပါ.
အူရီဒူးမြန်မာက Apple ၏ နောက်ဆုံးထုတ် iPhone Xs နှင့် iPhone Xs Max များကို မိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပြီး ဝယ်ယူ သုံးစွဲမည့်သူများအတွက် အထူးဒေတာ အစီအစဉ်များ ပေးအပ်သွားမည်ဟု အောက်တိုဘာ ၁၉ ရက်နေ့က ကြေညာလိုက်သည်။ “မြန်မာနိုင်ငံက ပြည်သူတွေအနေနဲ့ Apple ရဲ့.
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ မိုဘိုင်းတယ်လီကွန်းဈေးကွက်ထဲကို နောက်ဆုံးမှ ဝင်ရောက်လာတဲ့ Mytel က မြန်မာနိုင်ငံမှာ ပထမဆုံးဖြစ်တဲ့ eSIM ဝန်ဆောင်မှုကို စတင်မိတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်။ ဒီဝန်ဆောင်မှုဟာ မိုဘိုင်းဆက်သွယ်မှုတွေအတွက် ပုံမှန်ဆင်းကတ်မလိုအပ်ဘဲ eSIM ဝန်ဆောင်မှုကို ထောက်ပံ့ပေးနိုင်တဲ့ နောက်ဆုံးပေါ် မိုဘိုင်းဟန်းဆက်တွေကို အသုံးပြုနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ “Mytel သုံးစွဲသူတွေကို မြန်မာနိုင်ငံမှာ ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့.